लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्योगीहरूचिन्ताग्रस्त छन्। डेढ महिनाभन्दा लामो बन्दाबन्दीको अवस्थामा उद्योगधन्दा बन्द गर्न बाध्य भएका उनीहरूलाई कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने, बैंकको ऋण कसरी तिर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’ले उनीहरूलाई लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुृन्छ ? भनी सोधेको थियो। लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ ?
‘तलबको विषय हल गर्न खोज्छु’
पशुपति मुरारका, उद्योगी
लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने अन्योलको अवस्था छ। तर,हामीलाई लकडाउनपछिको जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे चिन्ता छ। हुन त केही उद्योगलाई अहिले नै सरकारले खोल्न दिइसकेको छ। तर, सरकारले भन्नेबित्तिकै खुल्ने अवस्था छैन। उद्योग खुलेपछि वर्किङ क्यापिटलको अभाव, कर्मचारीलाई तलब दिने विषय र विभिन्न खरिदको बिल तिर्ने समस्या हुन्छ। लकडाउन खुलेपछि ती समस्या हल गर्न खोज्छु। त्यतातिर नै बढी सोच्नुपर्ने बाध्यता छ।
कर्मचारीलाई काममा ल्याउनु पनि अर्काे चुनौतीको विषय छ। काम गर्दैमा कोरोना लाग्छ भन्ने अहिले आममानिसको सोचाइ रहेको छ। तर, सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाको विधि अपनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको देखिँदैन।विदेशतिर सरकारले उद्योगीलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सोचिरहेका छन्। यहाँ त उद्योगीले सधैँ नाफामात्रै कमाउँछ भन्ने नकारात्मक सोच राखिएको छ। रोजगारी नगुमाउन राज्यले संरक्षणको नीति लिनुपर्छ। अनेक समस्या छन्। कतिपय उद्योग दीर्घकालीन मारमा पर्ने देखिएको छ भने कतिपय मध्यकालीन मारमा।
‘आगामी रणनीति तय गरिन्छ’
कमलेश अग्रवाल, व्यवसायी
हामी व्यवसायीले सबैभन्दा पहिले सम्पत्तिको टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबीचमा भोग्नुपरेको क्षतिको आकलन गर्नुपर्छ। कोरोनाको प्रभाव अध्ययन गरेर आगामी रणनीति तय गर्ने पहिलो काम हुनेछ। जोखिम बढेसँगै बाहिरिने लगानीलाई कसरी नेपालमै आकर्षित गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो चासो छ।
त्यस्तै अब हामीले परनिर्भरता त्यागेर आत्मनिर्भर हुने गरी तयारी गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोगजगारीबाट फर्केका युवालाई नयाँ जोश र नयाँ उमंग दिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
मैले ‘इकोनोमिक ग्रोथ आफ्टर डिजास्टर’ भन्ने किताब पढेँ। यसमा जापानले कसरी आफूलाई अगाडि बढायो भन्ने कथा छ। हामीले जापानबाट पाठ सिक्नुपर्छ।
‘जिम्मेवारी पूरा गरिन्छ’
लक्ष्मीदास मानन्धर, अध्यक्ष, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन
लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन्। साल्ट ट्रेडिङले नुन तथा अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति सहज गरिरहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि साल्ट ट्रेडिङ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छैन।
लकडाउनपछि पनि कर्पाेरेसनले आफ्नो जिम्मेवारीपूरा गर्ने नै छ। तर, सरकारले कर्पाेरेसनको लाभांश स्वीकृत नगर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन। यस्तो संकटको बेलामा लाभांश स्वीकृत नगर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ। यसले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउने देखिएको छ। यसप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
‘कर्मचारीलाई सुरक्षा सामग्री व्यवस्था गरिनेछ’
दीपक मल्होत्रा, मोबाइल व्यवसायी
लकडाउन खुलेपछि व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमै सारा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। कर्मचारीव्यवस्थापन हाम्रो पहिलो चुनौती हो।कर्मचारीको तलब–सुविधा वितरणदेखि उनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा समग्रीको व्यवस्थासहित काममा लैजानुहाम्रो पहिलो काम हुनेछ।
सरकारले अहिलेसम्म हामी व्यवसायीका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याएको छैन। समयमै प्याकेज आएमा निजी क्षेत्रले राहत पाउँथ्यो। हाम्रो मागअनुसार ब्याज पनि घटेको छैन।समस्यासँग जुध्न स्टाफ कटौती गर्दैछौँ। तलब पनि केही प्रतिशत घटाउँछौँ। उद्योग सञ्चालनमा आएपनि पसलहरू नखुलेसम्म काम हुँदैन।
‘कालिगढलाई भरथेग गर्ने प्रयास हुनेछ’
तेजरत्न शाक्य, पूर्वअध्यक्ष, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
लकडाउनअघि ७७ हजार रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको सुनको भाउ अहिले ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्टिय बजारमा सुनको भाउअकासिएको छ। त्यसैले नेपाली सुनबजार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
अहिले त मानिसलेखानपानको जोहो गर्ने मात्रै स्थिति छ। नेपालमा अत्यावश्यक खर्च कटाएर बचेको पैसा सुनचाँदीमा लगानी गर्ने चलन छ। त्यसलै यो अवस्थामा यसको कारोबारमा सुधार आउँदैन।
सुनचाँदी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ लागिपरेको छ। त्यसबाहेक गहना बनाउने कालिगढहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। नेपालभर दुई लाख कालिगढ छन्। उनीहरूलाई भरथेग गर्ने प्रयास हुनेछ। त्यसबाहेक १० हजार स्टाफ छन्। तलब कसरी दिने भन्ने समस्या छ। लकडाउन खुलेपछि यिनै समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिनेछ।
‘साँवा–ब्याजको भाका सार्न अनुरोध गरिन्छ’
नरेशध्वज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान)
होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय दुई वर्षसम्म उठ्न सक्ने स्थिति छैन। लकडाउनपछि रेस्टुरेन्ट खुलिहाल्यो भनेपनि ग्राहक आउने सम्भावना देखिँदैन।तर, सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याए होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा सुधार आउन समय लाग्दैन।
हामीलाई अहिले आवश्यक भनेको वर्किङ क्यापिटल हो। सामाजिक दूरी कायम गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिन्छ। साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद छ महिनासम्म सार्न अनुरोध गरिरहेका छौँ।
त्यस्तै, होम डेलिभरीको राम्रो सम्भावना छ। यसका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्छ।
‘शून्यबाट सुरु गर्ने चुनौती सामना गरिन्छ’
शिव घिमिरे, ग्यास उद्योगी
अहिले लकडाउनमा ग्यासको माग कम छ। लकडाउनपछि माग एक्कासि ह्वात्तै बढ्ने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसका लागि चुनौती सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ।
सबै कारोबार शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।लकडाउन खुलिहालेपनि आयात गर्ने बेलामा चालक आवतजावत गर्न डराउने अवस्था रहन्छ। अत्यावश्यक वस्तु भएकाले एलपी ग्यासमा प्रेसर सधैँ रहन्छ। काममा प्रोत्साहन गर्न मजदुरलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्‍यो।
पछिल्लो अवस्थामा भारतको नाकाबन्दीबाट झस्किएपछि बढी सामान जोहो गर्ने स्थिति छ। ग्यास सिलिन्डर घरघरमा थन्किएका छन्। लकडाउनपछि सिलिन्डरकै अभाव हुन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।
प्रस्तुतिः पवन तिमल्सिना